Wringer Trolly Factory - China Wringer Trolly Ndị na-emepụta, ndị na-eweta ngwaahịa
24L / 32L Side pịa otu wringer Trolley –H0101 / H0102
Omenala mops na-emegharị mmiri ahụ site na aka, bọket ahụ dịkwa arọ ma sie ike ịkwaga, ruru unyi na ike gwụrụ. Trolley trolley nwere ike ịpịpụ mmiri ruru unyi site na ịpịta ala, ndị na-agagharị agagharị na-agagharị mfe. Ya na-eme ka ịdị ọcha dịkwuo mfe.
36L Side pịa otu wringer Trolley B-040
Idebe azụmahịa gị ọcha abụghị obere ọrụ, mana iji bọket kwesịrị ekwesị nwere ike ime ka ọ dịrị gị mfe. Ma ị na-agba obere azụmahịa ma ọ bụ na nnukwu ụlọ ọrụ, mop ịwụ na wringer bụ ihe mgbakwunye dị mkpa maka ihe niile site na nhicha kwa ụbọchị iji mebie ọgbaghara.
24L / 32L Down pịa otu wringer trolley -H0102 H0104
The wringer trolley obere na-adaba adaba, dịgasị iche iche nke ojiji, dị ka ụlọ, uloru, ụlọ nkwakọba ihe, lọjistik emmepe, Ahịa na na, adabara niile n'ala ala.
34L / 46L Side pịa abụọ wringer Trolley –H0201 0202
A na-eji plastik dị elu dị elu mee ya. N'ịbụ onye siri ike, ịwụ bụ ihe mgbapụta. Oke ya dị nro na-eme ka nhicha dị ọcha. A na-eme wiil ndị ahụ site na roba dị ọcha, na-ekwe ka ọ dị mfe ịgagharị mkpọtụ, ma hapụ usoro na kapeeti.
34L / 46L Down pịa abụọ wringer Trolley-H0203 / H0204
The mesikwuru mmiri adịrị isi na ịpị draya ka nke ezi ígwè, ikwe a ogologo were. Mgbanwe ahụ adịghị ada. Mmiri mmiri anaghị agbawa. The spraying plastic mere ahụ bụ ozize-àmà. Ngwaahịa a magburu onwe ya n'etiti ngwaahịa nke ụdị ya.
Nhicha Wax gbọmgbọm B042
Igbe nchekwa aka-ebe nwere ike ịchekwa ngwaọrụ, ihe nhicha, ngwa ọgwụ, ngwa ahịa.
Nhicha Caddy B041
Were niile ihicha onunu, disinfectants, ngwá ọrụ, ma ọ bụ ọgwụ na ahụ ike na ihe na gị na nke a kemfe Twin Tote Caddy. Abụọ miri emi, buru ibu buru ibu na-enye ogologo nchekwa maka nhicha na ngwaọrụ, ọbụlagodi obere ihe anaghị efu. T
Ngwá Ọrụ Jikwa Caddy B-039B
Mkpụrụ ego buru ibu nwere ike ijide ọtụtụ nhicha ma ọ bụ ngwaọrụ ngwaike